China Ubushushu ibhegi mveliso kunye nabathengisi | Huizhou
Ingxowa ye-thermal, njengoko igama licebisile, sisiqulatho eshushu kwaye sigqunyiwe, kwaye sisetyenziswa ngokubanzi ukufaka indawo engaphakathi yengxowa kwindawo eyiyo yangaphandle, buthathaka ukuhambisa umoya oshushu nobandayo. Isebenza ukugcina kupholile okanye kushushu. Ngeli xesha izinto ezishushu ezisetyenzisiweyo zithambile kwaye ziyomelela, ke oko kunika iimveliso zakho ukhuseleko oluninzi.
Isingxobo se-thermal, njengoko igama lisitsho, sisikhongozeli eshushu kwaye sigqunyiwe, kwaye sisetyenziswa ngokubanzi ukufaka indawo engaphakathi yengxowa kwindawo eyiyo yangaphandle, buthathaka ukuhambisa umoya oshushu nobandayo. Isebenza ukugcina kupholile okanye kushushu. Ngeli xesha izinto ezishushu ezisetyenzisiweyo zithambile kwaye ziyomelela, ke oko kunika iimveliso zakho ukhuseleko oluninzi.
2. Ngokubanzi, ibhegi enye ye-thermal yenziwe ngamanqanaba amathathu, okt inxalenye yangaphakathi, izinto ezishushu eziphakathi kunye neqokobhe langaphandle. Ngokusekwe kwisicelo esahlukileyo esifana nobisi, ikeyiki, inyama kunye nekhemesti, unokuba noyilo olwahlukileyo. Kwaye ezinye izinto ezinje nge-zip, ushicilelo, ukutsala njl njl, ziyafumaneka kukhetho lwakho olubanzi.
3. Ukuba iingxowa ze-thermal zisetyenziselwa ukuhanjiswa kweyeza, unokufuna ukubekwa kweliso kubushushu. Okanye ezinye iibhegi ze-thermal zenzelwe ukupakisha kwakanye.
4.Iingxowa zeThermal zihlala zisetyenziswa kunye nejeli yokupakisha yomkhenkce okanye isitena somkhenkce ukwenza iphakheji yolawulo lokudibanisa (kokubini kugcinwe kubanda kwaye kugqume ubushushu) kwezothutho olubandayo.
I-1.Huizhou Thermal Bag yenzelwe ukugcina kubanda okanye kushushu ngaphakathi kwesingxobo ngokugquma kwihlabathi langaphandle, ukugcina amaqondo obushushu ehambelana ngexesha lokuhamba. I-2 ubukhulu becala zisetyenziselwa ukuhambisa iimveliso ezinqabileyo, ezinokutsha kunye nobushushu, ezinje nge: inyama, ukutya kwaselwandle, iziqhamo nemifuno, ukutya okulungiselelwe, ukutya okungumkhenkce, i-ayisi khrim, itshokholethi, iilekese, iikeyiki, ikhekhe, itshizi, izithambiso, ubisi, amayeza kunye nokunye, ngesishwankathelo, ikakhulu ukutya kunye neemveliso ezinxulumene namayeza.
3.Ingxowa ezishushu zenziwa njengomqamelo kunye ne-insulator ngokuchasene neentlobo ezintathu zokudlulisa ubushushu, ukuqhuba, ukuhambisa iimveliso zakho xa kuthunyelwa.
4.Iibhegi zethu zokufudumeza zisetyenziselwa ukuthunyelwa kwempahla ebandayo ukugcina ukubanda okanye ukufudumala, okanye ukunyusa imveliso kwiimvakalelo apho ufuna ibhegi enye ekhangeleka kakuhle kodwa ngexabiso eliphantsi kunye neemveliso zakho.
5.Iingxowa ze-thermal zihlala zisetyenziswa kunye nezinye iipakethi zefriji, ezinje ngejeli yethu yokupakisha ice kunye nezitena zomkhenkce.
EPE pearl umqhaphu,
I-EPE yomqhaphu weeperile
Qaphela: Iinketho ngentando ziyafumaneka.
Ukukhuselwa kwe-1.Multi kunye nokusebenza okuphezulu kwiimveliso zakho ukugcina kushushu okanye kubanda
2.Vastly esetyenziselwa iimeko ezininzi zolawulo lobushushu, ngakumbi ukutya kunye namayeza
3.Collapsible yokugcina indawo kunye nokuhamba ngokulula.
I-4.Ingaba ngumxube wokuxuba, izinto ezahlukeneyo ezikhoyo ukufanisa iimveliso zakho.
5.Excellent zombini ukutya kunye namayeza abandayo chain ukuthunyelwa
Ukusetyenziswa kwesiqhelo kweengxowa ze-thermal zezokuhanjiswa kwetyathanga elibandayo, njengokuhanjiswa kokutya okutsha, ukutya okususwayo okanye amayeza ukugcina iqondo lobushushu lihambelane.
I-2.Or yezihlandlo zokunyuselwa njengaxa unyusa inyama, ubisi, ikeyiki okanye izinto zokuthambisa, apho ufuna isipho esinye esihle esihamba kakuhle kwiimveliso zakho ngelixa ixabiso eliphantsi kakhulu.
Zingasetyenziswa ngokudibeneyo neepakethi zomkhenkce zejeli, izitena zomkhenkce okanye umkhenkce owomileyo ukuhanjiswa kwemveliso efuna ukugcinwa kubushushu obucwangcisiweyo ixesha elide.
4.Iingxowa ze-thermal ziimveliso eziphuhliswe kakuhle esikwaziyo ukubonelela ngazo uluhlu olubanzi lokukhetha kwiinjongo zakho ezahlukeneyo.
Egqithileyo Ibhokisi yePlastiki epholileyo
Okulandelayo: Liner Box zigqunyiwe